Zavatra mety hahatonga anao tsy hanana antony manosika hampiofana | Nutri Diet
Tsy voatosika hampiofana? Ireo no mety ho antony
Rehefa manomboka mihena ny antony manosika hampiofana dia tonga ny fotoana manombatombana antony mety hitranga alohan'ny hanomezana anao sy ny fanaparitahana ny valiny azo.
Na dia maro aza ny olona manao ny mifanohitra amin'izany, dia ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo antony mety nahatonga anao ho leo amin'ny fampiofanana nataonao.
1 Ny sainao dia nilaozan'ny fampitahana
2 Kaloria may no hany famantarana
Ny sainao dia nilaozan'ny fampitahana
Ny fahazoana valiny mifandraika amin'ny endrika sy ny haben'ny vatana dia tsara, fa raha ny fampihetseham-batana fotsiny dia mifototra amin'izany dia mety ho lasa mekanika sy mankaleo. Ary inona no zava-dehibe kokoa: io dia mety hisakana anao tsy hianatra izay vitan'ny vatanao sy hampivelatra ny tanjanao.
Raha heverinao fa io ny olanao dia aza manao fanazaran-tena fotsiny mba hampisehoana ny vatanao amin'ny fomba iray. Ampidiro koa ny fampihetseham-batana amin'ny fampiofanana ataonao izay manampy anao hiasa tsara kokoa sy hanatsara ny kalitaon'ny fiainanao amin'ny ankapobeny. Ny tena tanjon'ny fanatanjahantena dia tsy ny fanatsarana ny endrika ivelany, fa ny fahatsapana fa miasa tsara kokoa ny vatantsika. Ny yoga sy ny fitsangantsangana dia ohatra tsara amin'ny fampihetseham-batana izay tsy mametraka ny sainao, fa ataon'izy ireo mandray anjara sy mamelombelona azy. Na dia zavatra hafa aza dia mety miasa amin'ny olona tsirairay amin'ity lafiny ity arakaraka ny toetrany sy ny tsirony.
Kaloria may no hany famantarana
Ny fanomezana lanja ny fanatanjahan-tena miorina amin'ny kaloria fotsiny dia tena manentana ny olona sasany. Na izany aza, io paikady io dia tsy mandeha tsara ho an'ny rehetra. Misy ireo miafara may na maratra manatona ny fiofanana amin'ity fomba ity.
Raha mieritreritra ianao fa izany no mahatonga ny tsy fahaizanao manentana, manomboha manao fampiharana izay mahatonga anao hahatsapa ho tsara ary mandray anjara amin'ny fiadanam-po amin'ny vatanao sy ny sainao. Jereo ny kaloria may, fa ataovy izay hifalifaliana voalohany isaky ny mihetsika ny vatanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Tsy voatosika hampiofana? Ireo no mety ho antony
Tandremo ny masoandro raha mihinana ireto fanafody manaraka ireto ianao
Ny fomba matsiro indrindra amin'ny fandrahoana ovy natsatsika